ေဆာင္းပါး | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/07/2013
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းကို နားထောင် ကြည့်မည်ဆို ပါက ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းတွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ၊ လူကုန် ကူးမှု၊ မူးယစ် ဆေးဝါး ပြဿနာ၊ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု၊ ဒုစရိုက် ရာဇဝတ် ထူပြောမှု၊ လင်မယား ကွာရှင်းမှု၊ ရင် သွေးငယ် စွန့်ပစ်မှု၊ သဘာဝ ကပ်ဘေးနှင့် ရောဂါ ဆိုးကြီးများ စသည့် အနိဋ္ဌာန်ရုံ သတင်းများက လွမ်းမိုး နေရာ ယူထားသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ လူသားတို့ အတွက် မျှော်လင့်ချက်မှာ ယဲ့ယဲ့ ကလေး သာရှိပြီး ခိုကိုးရာ မဲ့နေသလို ခံစား နေကြ သည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရား သခင်သည်လူသားများကို ဂရုမစိုက်တော့ပြီ လော။ လူသားများကို လျစ်လျူရှုနေပြီလော။ ဘုရားရှင်သည် လူသားများအား ဆင်းရဲ ဒုက္ခနှင့်ဆိုး သွမ်းမိုက်မဲမှုကို အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုထားသနည်း ဟူသောမေးခွန်းမှာ ဒွိဟဖြစ်စရာပေါ်လာပါသည်။
ဆရာကြီး ဘွန်ကီက ယာဉ်ထိန်းရဲများ အားမေးခွန်း တစ်ခုမေး ခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ များသည် ယာဉ်တိုက်မှုကို ခွင့်ပြုထား ရသနည်းဟုမေးသောအခါ ယာဉ်ထိန်း ရဲများက ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို အတိအ ကျထုတ်ပြန် ထားပြီသားဖြစ်သည်။ အဆိုပါစည်း ကမ်းများကို လိုက်နာလျှင် မတော် တဆယာဉ်တိုက် မှုများဖြစ်ပွားမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာဘဲ၊ မဆင်မခြင်နမော်နမဲ့ကျူး လွန် ဖေါက်ဖျက်ပါက ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး မလို လား အပ်သောဆိုးကျိုး ပြဿနာများ၊ အနိဋ္ဌာန်ရုံများကို ကြုံရမည်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြပါသည်။
ထိုနည်းတူ ဘုရားရှင်သည် လူသားများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းပညတ်များကို ကြိုတင်ပြ ဋ္ဌာန်းပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ နှုတ်ကပတ် တော်တည်းဟူသော သမ္မာကျမ်းစာ ပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့ လူသားများ ဆိုးသွမ်း မိုက်မဲပြီး ဆင်းရဲ ဒုက္ခနှင့် အနိဋ္ဌာရုံများ ကြုံတွေ့နေ ရခြင်းမှာ ဧဒင်ဥ ယျာဉ်မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင် လူသားတို့သည် နှုတ် ကပတ်တော် ကို ကျောခိုင်းကာ မှားယွင်း သောရွေး ချယ်အသက်ရှင် မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် လူသားများ ကို မျက်နှာလွှဲ စွန့်ပစ် ထားခြင်းမရှိပေ။ ထာဝရဘုရားနှင့် သဏ္ဌာန်တူ ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသောလူသား များသည် တန်ဖိုးကြီး လှပါသည်။ ဆားဗီးယားတို့ ၏ ပစ်ချခြင်း ခံရသော အမေရိကန် လေတပ်ဗိုလ်ကြီး စတော့အိုဂရက်သည် တောထဲ၌ ခြောက်ရက်ကြာ ပုန်းအောင်း နေရာမှ သူ့အား ကယ်တင်ရန် စစ်ဆင် ရေးတွင် အမေရိကန် စစ်တပ်က အသုံးပြုခဲ့သော လေယာဉ်နှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် မှာ ဒေါ်လာ သန်းခြောက်ထောင် ရှိကြောင်း သိရ သည်။ စတော့အို ဂရက်ဒီ သည် ဒေါ်လာသန်း ခြောက်ထောင်တန်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော်က လူတစ်ဦး၏တန်ဖိုးသည် စကြဝဠာထက် မက တန်ဖိုးရှိပြီး အလေးအနက် ထားကြောင်း သွန် သင်ခဲ့သည်(မဿဲ ၂၆း၁၆)။ ထို့ကြောင့် ခရစ် တော်သည် လူသားများ ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝသောအ သက်တာရရှိနိုင်ရန်အတွက် အပြစ်ငရဲမှ ရွေးနုတ် ကယ်တင် ပေးခဲ့ပါသည်။
အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင်သည် လူတစ် ဦးစီ၏ဆံပင်ကို အကုန်အစင်ရေတွက်လျက်ရှိပါ သည်။ လူတစ်ဦးစီ၏ထွက်သက်ဝင်သက်သည် ဘုရားသခင်၏ လက်တော်ထဲ တွင် ပါရှိပါ သည်။ ဘုရားသခင် အခွင့် မပေးလျှင် စာငှက် တစ်ကောင် မျှ မြေပေါ်မကျနိုင်ပါ။ ကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သည့် တိုင် အောင် ယုံကြည်သူများနှင့်အတူ ရှိနေမည် ဖြစ် ကြောင်း ကတိပေး ထားပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ထမင်းချက်နေစဉ် မီးပျက်သွား သည်။ မီးပြန်မလာသဖြင့် ထမင်းမှာမနူးမနပ်ဖြစ် ပြီး စား၍မရတော့ပါ။ မီးသွေးမွှေးပြီး ပြန်ချက်ရပါ သည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူ အသီးသီးသည် အသက် နှင့်အလင်းတည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မပြတ်ဆက်သွယ်ရန် လိုပါသည်။ အလင်းပေး သောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာ မိမိအသက် တာကို ဘေးကင်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ အသက်တည်းဟူသောနှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့်သာ အန္တရာယ်အပေါင်းကို အောင်မြင် ကျော်လွှားနိုင် မည်ဖြစ်သည်(ဆာလံ ၁၁၉း၁ဝ၅၊ သု ၁း၃၃)။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလိုက်နာဘဲ ကျောခိုင်းအသက်ရှင်ပါက မီးပျက်သွားစဉ်က ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှ ထမင်းကဲ့သို့ စားရန် မကောင်း တော့ဘဲ ပျက်စီးခြင်းအားအခြေအနေမျိုးနှင့် ရင် ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံမှအငံဓါတ် ကင်းမဲ့သောဆားခဲများကို လမ်းခင်း ကျောက်များ အဖြင့်သာ အသုံးပြုခြင်းခံရသည်။
ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ် အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ(ယော ၁၅း၅)။ လူသား တစ်ဦးစီ၏အစဉ်းလဲဆုံးအရာမှာ စိတ်နှလုံးပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူသားများ ဆိုးသွမ်း မိုက်မဲနေရ ခြင်းမှာ စိတ်နှလုံးကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသား တစ်ဦးစီ၏စိတ်နှလုံးကို ထိန်းချုပ်ပဲ့ပြင်လမ်းပြရန် ဝိညာဉ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပြည့်ရမည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာရှင်သန်ရန်အတွက် အစားအစာမှီဝဲနေရသလို ဝိညာဉ်ရှင်သန်နိုးကြား ရန်အတွက် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မှီဝဲရမည်။ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း အာဗြဟံလင်းကွန်း က သမ္မာကျမ်းစာမရှိလျှင် အမှားအမှန်ကိုသိနိုင်မည် မဟုတ်၊ လူကိုပေးသနားတော်မူသောဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ထဲက အကောင်းဆုံး၊ အ မွန်မြတ်ဆုံးအရာမှာ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။
စာရေးဆရာကြီး ဝီလျံရှိတ်စပီးယားက စာတန်နတ်ဆိုးပင်လျှင် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အ တွက် ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုရွတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ယေရှုစုံစမ်းခံခဲ့ရစဉ်က စာတန်ကို နှုတ်ကပတ်တော် လက်နက်အားဖြင့်သာ ကိုင်စွဲ အနိုင်ယူခဲ့သည်မှာ ဆင်ခြင်စရာပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် နှုတ်ကပတ် တော်မရှိပါက၊ နှုတ်ကပတ် တော်အတိုင်း အသက် မရှင်ပါက စာတန်ပစ်ခတ်သောမီးစက်လက်နက် အောက်တွင် မရှုမလှအရေးနိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ စာ တန်သည် ဟောက်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ် သူအား မျိုရမည်ကို လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်နေပါ သည်(၁ပေ ၅း၈ဝ)။
ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည် နှုတ်က ပတ်တော်ဖတ်ရှုရန် အချိန်မပေးနိုင်ကြ။ စာတန် က ယုံကြည်သူတို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်အချိန်ကို ခိုးယူ နေ၏။ အမျိုးသမီးများက ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်း တွဲတွင် မျောပါနေကြသည်။ အမျိုးသားများက ညသန်းခေါင်ကျော်သော ဘောလုံးပွဲများကို အချိန် ပေးနိုင်သလောက် ကျမ်းစာ ဖတ်ရန်အချိန် မပေး နိုင်ကြ။ လူငယ်များက ကျမ်းစာဖတ်ရန်ထက် ဂျာ နယ်၊ ဝတ္ထု၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများကိုသာ နှစ်ခြိုက်စွဲ လမ်းနေကြသည်။ စာတန်သည် ယုံကြည်သူများ ဘုရားရှင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ရန်ထက် အခြား သောကိစ္စများ၌သာ အချိန်ကုန်နေစေသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသူများသည်လည်း အ သက်တာပြောင်းလဲစေသောနှုတ်ကပတ်တော် ထက် အသင်းသားများ အကြိုက် ပုံပြင်နှင့် ဟာသ များကိုသာအသား ပေးဝေငှကြသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးမပါရှိသဖြင့် အသင်း သားများနှလုံးသားများ ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ မပူ မအေး နွေးနေကြသည်။
လူသားများသည် ဤလောက၏ဧည့် သည်များပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများ သည် ခရီးသွားမည်ဆိုပါက ဧည့်လမ်းညွှန်၊ လမ်း ပြသူတို့ လိုအပ်ပါသည်။ လောက ဧည့်သည် ဖြစ် သောယုံကြည် သူများသည်လည်း ဧည့်လမ်းညွှန့် (သို့)လမ်းပြသူဖြစ်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်အား ဖြင့်သာ မိမိ အသက်တာ ပန်းတိုင်ကိုရောက် ရှိနိုင်ပါ သည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝမှစ၍ လူသားများ အတွက် ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ဘုရားရှင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံ လိုက်လျှောက်ရန် ဖြစ် သည်။ နတ်ဆိုးများ သည်ပင်လျှင် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သော်လည်း နာခံ လိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိ ပေ(ယာ ၂း၁၉)။ ခရစ်တော် တည်းဟူသောနှုတ်က ပတ်တော်ကို ယုံကြည်နာခံမှသာ ပြည့်စြုံ<ွကယ်ဝ သောအက်တာကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ် တော်ကို နေ့ညမပြတ်ဖတ်ရှုပြီး နာခံလိုက်လျှောက် မှသာ အောင်မြင်သော အသက်တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပျံသန်းခြင်း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 12/04/2013
Posted in: ေဆာင္းပါး.	Tagged: ရူပါရုံ.	1 Comment
ငါတို့ တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက် တတ်နိုင်တော်မူသောအရှင် (ဧဖက် ၃း၂၀)
မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ အစပြုချင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျမ်းစာထဲက လူပု၈္ဂိုလ်တွေကို လွယ် ကူတဲ့ အလုပ်တွေ ပေးဘူးပါသလား။ ကျွန်တော် ရိုးသားစွာနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။ သင်ဒီအရာကို စဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ယုံကြည်သူတွေကို တစ်စုံတစ်ရာပြောဆို စေခိုင်း တဲ့အခါ အချိန်မယူရပါဘူး။ မခက်ခဲပါဘူး လို့တော့ ဘယ်တော့ ဘယ်တော့မှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ မှန်ပါတယ်။
ကလေးဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ လူတိုင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ခေါ်တဲ့အခါ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ခေါ်သံနဲ့ပါ။ လူ့အမြင်၊ လူ့အတွေးများနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အမှန်တကယ်တွေ့နိုင်ဘို့ အရမ်း ခက်ပါ လိမ့်မယ်။
နောဧ သိကျွမ်းခွင့် ရခဲ့တဲ့ ဘုရား
နာဧထံကို ဘုရားသခင်လာတဲ့အခါ “နောဧ ငါရဲ့ အိပ်မက်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် မင်းအ ကောင်အထည် ဖော်ပေးရမယ်။ လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ငါ့မှာ အကြံအစည် တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကို မင်းနဲ့ဘဲ ငါလုပ်ချင်တယ်။ အခုအခါမှာ မင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ လှောင်ပြောင်သရော် မှုတွေကို ခံစားရမယ်။ ရန်လိုမှုတွေကို ခံစားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ ငါက မင်းကို မဖြစ်နိုင်တာတွေကို လုပ်စေချင်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေထဲက အကောင်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ အိမ်ထဲမှာ ထားပါ။ အစာကြွေးပါ။ စောင့်ရှောက်ပါ။ အဲဒါကို မင်းရဲ့ မိသားစုနဲ့ အစပြုလုပ်ဆောင်ပါ။ မင်းရှိနေတဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲကနေ ထွက်လိုက်ပါ။ ငါမင်းကို ကတိပေးတယ်။ အဲဒါတွေ အားလုံးကို မင်းတစ်ယောက်ထဲ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလည်း မင်းနဲ့ အတူရှိနေမယ်။ ငါမင်းကို လက္ခဏာ သက်သေပေးမယ်။ မင်းထံမှာ ငါ့ရဲ့ ကတိတွေရှိနေပြီး၊ ငါ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဘဲ အသက်ရှင် လုပ်ဆောင် နေရတယ် ဆိုတာကို သတိ ရထားပါ။ နောဧအတွက် ရရှိတဲ့ ပဋိညာဉ် လက္ခဏာ သက်သေကတော့ သန့်တန့်ပါဘဲ။ နောဧက ပြန်ပြော ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော် ဘာမှ နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ကိုယ်တော်အတွက် လုပ်ပေးပါမယ်။ ကျွန်တော့်ကို အသုံးပြု တော်မူပါ။
အာဗြဟံ သိကျွမ်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဘုရား
အာဗြဟံ ငါ့ထံမှာ မင်းအတွက် အိမ်မက် တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်ကို မင်းတာဝန် ယူရမယ်။ အခု ငါ ဣသရေလဆိုတဲ့ လူမှု အသိုက်အဝန်းကြီး တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တယ်။ မင်းရဲ့ မိသားစုထဲကနေ ထွက်လိုက်ပါ။ မင်းရဲ့အိမ်တွေ၊ မင်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမူတွေ မင်းရဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ အရာရာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ မင်းတစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုထံကို သွားပါ။ မင်းကို မင်းမသိကြွမ်းတဲ့ လူတွေကြားမှာ ငါအသက် ရှင်စေမယ်။ မင်းကို ငါလမ်းပြမယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းကို ငါကတိ တစ်ခုပေး ပါမယ်။ မင်း တစ်ယောက်ထဲ သွားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါလည်း မင်းနဲ့ အတူရှိမှာပါ။ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ ကတိထဲမှာ ရှိနေပြီး ငါ့ရဲ့ မျက်မှောက်တော်မှာဘဲ အသက်ရှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဗြဟံရတဲ့ လက္ခဏာ ပဋိညာဉ်ကတော့ အရေ ဖျားလှီးခြင်းပါဘဲ။ အာဗြဟံက ဘာမျှ ပြန်မပြောခဲ့ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုယ်တော်။ ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီး။ ကျွန်တော်ကို အသုံးပြုတော်မူပါ။
မောရှည် သိကျွမ်းခွင့် ရခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်
မာရှည် ငါတော့ ငါ့လူတွေကို ဖာရောဘုရင်ရဲ့ လက်ထဲကနေ လွှတ်မြောက်စေချင်ပြီ။ ဒါ ကြောင့် အလွန်တရာ တန်ခိုး ကြီးလှတဲ့ ဖာရော ဘုရင်ထံ သွားပါ။ သူ့ကို အာခံမှု ပြုပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါ။ “ငါ့ လူတွေကို အ မြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့” မောရှည်က ပြန်ပြော လိုက်တယ်။ ကိုယ်တော် ကျွန်တော့်မှာ စကားလည်း နှေးပါတယ်။ အစွမ်းလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တော် ကျွန်တော့် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အသုံးပြုတော်မူပါ။
ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ကျမ်းစာထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ယောက်ျား၊ မိန်းမ မည်သူမဆို မတူညီတဲ့ အိမ်မက် ကလေးတွေ၊ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အိမ်မက် ကလေးတွေကို ပေးတွေ့စေပါတယ်။
နေဟမိကို ကြည့်ပါ။ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရပြီး၊ သူ့လူမျိုးတွေ အတွက် မျှော်လင့်ချက် တွေကို ရှင်သန်စေခဲ့တယ်။ ဒါဝိတ်ဟာ လူ့ဘီလူးကြီး ဂေါလျက်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး သူ့လူတွေကို ကယ်တင် စေခဲ့တယ်။ ဧသတာဟာ သူ့လူမျိုးတွေ ပြဿနာရှိပြီး အသက် အန္တရယ်နဲ့ ရင်ဆိုင် နေရချိန်မှာ ရှင်ဘုရင်ရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့ရတယ်။ ယောသပ်ဟာ ငြိုငြင်ခံရပြီး ထောင်ကျကာ လူမျိုးတော် အတွက် ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရက်မှာ သူ့လူမျိုးတွေ အတွက် အစား အစာကို ရရှိစေဘို့ ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒံယေလဟာ ခြင်္သေ့တွင်း ထဲမှာ ပစ်ချခံရပြီး ဆိုးညစ်တဲ့ လူတွေ အကြားမှာ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို ပြသဘုိ့ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာ ဘုရားသခင်နောက်ကို တစိုက်မက်မက် လိုက်ခဲ့ပြီး ခက်ခဲ မှုပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရကာ သူတို့ရဲ့ အသက်တာမှာ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို မြင်သာ စေရန် အသုံး ပြုခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ အိပ်မက်တွေကို ပေးတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အိပ်မက် အမျိုးအစားပေါင်း များ စွာကို ဖန်ဆင်းပြီး သင့်တော်ရာ လူတွေထံကို ပို့ဆောင်နေပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အလုပ်ကတော့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ အသက်ရှင်မှုမှာ ရူပါရုံတွေ၊ အိပ်မက်တွေ ပေးဘို့ပါဘဲ။ ဘုရားသခင်ဟာ မြေပြင်ပေါ်က အိပ်မက်တွေအားဖြင့် ကောင်းသောအရာ တွေကို ခံစားလျက် ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ အိပ်မက်တွေ ရှိနေတာ၊ ရူပါရုံတွေ ရှိနေတာတွေဟာ ကောင်း သော အမှုအရာတွေပါ။ အိပ်မက်တွေ ကနေ သင်ရယူနိုင်တဲ့ အရာ (၄)ခုကို ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါတယ်။
(၁) အိပ်မက်ဟာ သင့်ကို လမ်းညွှန်မှု ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
ယောသပ်သည် အိပ်မက်ကို မြင်ရ၍ အကိုတို့အား ပြန်ပြောသဖြင့် သူတို့သည် သာ၍မုန်းကြ၏။ (ကမ္ဘာ ၃၇း၅)
ယောသပ်ဟာ အိပ်မက်ကို ဘုရားသခင်ထံက ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အိပ်မက်သည်ပင်လျှင် ယောသပ်ဖြစ်ရမယ့် လမ်းကြောင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ အိပ်မက်ကဘဲ သူ့မိသားစုထဲမှာ သူ့ကို ပြဿနာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းစား ခံရတာ၊ စုံစမ်နှောင့်ယှက် ခံရတာ၊ စွတ်စွဲခံရတာ၊ ထောင်ကျတာနဲ့ ပြန်လည် လွှတ်မြောက်ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကို ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာကို ရောက်ရှိလာတာ တွေအားလုံးဟာ အိပ် မက်ကြောင့်ပါဘဲ။
သင်ဟာ ယေရှုခရစ်တော်ကို အသက်တာထဲမှာ မရသေးဘူးဆိုရင် သင်အတွက် ဖြစ်ရမယ် လမ်းညွှန် အိပ်မက်မျိုးကို ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်ဟာသင့်ကို မိမိဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ် လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေလက္ခဏာပါ။ အဲဒီလိုသက်သေရမှ သင်ဟာ ဘယ်လိုမျိုး အသက်ရှင်ရမယ် ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ရရှိပြီးပါလား။
• သခင်ယေရှုနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ရရှိခြင်းဟာ သင့်အတွက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါ။
• မိမိရဲ့ အဖြစ် (Identity) နဲ့ အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ပါ။
• မိမိရဲ့ အိပ်မက် နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပါ။
• မိမိရဲ့ အသက်တာထဲက လမ်းညွှန်မှုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပါ။
သင့်အသက်တာထဲက ရည်ရွယ်ချက်ကို အမှန်တကယ် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ အိပ်မက်ကို တန်ဘိုးထားပါ။ အဲဒီအရာကို တန်ဘိုးထား ဆောင်ရွက်ရင် အဲဒီအိပ်မက်က သင့်ကို အမှန် တကယ် ပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
(၂) အဲဒီအိပ်မက်က သင့်ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေသော့ကို ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အိပ်မက်မရှိရင် အခြေအနေ တစ်ခုရဲ့ သော့ခတ်ခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်လာတဲ့ အရာတွေကို သာမန်တုန့်ပြန်ရုံ မျှလောက်သာ ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ သင့်မှာ အိပ်မက် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ရူပါရုံ မရှိခဲ့၇င် မည်သို့မျှ လန်းဆန်း တက် ကြွမှုကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ အခြေအနေ တစ်ခုကို ရအောင် ဖန်တီးလိုစိတ် ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအရာက ကျွန် တော်တို့ကို နောက်သို့ ပြန်စေနိုင်တဲ့ အရာဖြစ် လာပါတယ်။ သင့်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အိပ်မက် သို့ ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခု ရှိနေပြီးဆိုရင် အဲဒီအရာကို တန်ဘိုးထားပြီး စတင် လုံးပန်း ကြိုးစားအားထုပ် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ သတ္တိတွေထက် ပိုမို ရဲဝန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ်းစာက ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အညီ ဖန်ဆင်းခံထားရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ယေရမိ ၂၉း၁၁ မှာ ပြောထားတာက
တစ်ဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား ငါသည် သင်တို့ကို အကျိုးနည်းစေခြင်းငှါ ကြံစည်သော အကြံမ ဟုတ်ဘဲ၊ သင်တို့သည် မျှော်လင့်သော အကျိုးကို ရမည့်အကြောင်း ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှါသာ သင် တို့အဖို့ ကြံစည်သော အကြံတို့ကို ငါသိ၏။ (ယေရမိ ၂၉း၁၁)
အိပ်မက်တွေဟာ သင့်ရဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဟူသမျှကို တန်ခါးဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(၃) အိမ်မက်များက အနာဂတ်အတွက် သင့်ကို စည်းကမ်းတွေ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ်မည်။
အိပ်မက် (ရူပါရုံ) မရှိရင် သင်ဟာ ထိုင်နေရုံမျှသာ ပြုနေတဲ့သူပါ။ အနာဂတ်အတွက် ဘာမျှ လုပ်ဘို့လည်း မကြိုးစား တဲ့သူပါ။ နောက်ကို ပြန်လှည့်နေတဲ့သူပါ။ အဲဒီ အိပ်မက်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပုံစံတွေ သွင်းပေးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေထိုင်မှုကို ပြုပြင်စေတယ်။ အိပ်မက်ဟာ သင့်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
အဲဒီအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဘို့ ပြုလုပ်ရင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က လမ်းပြပါဝင်လုပ် ဆောင် ပါလိမ့်မယ်။
(၄) အိပ်မက်တွေက သင့်ကို ဘုရားသခင်ထံမှာ ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အိပ်မက်တွေ ဖြစ်မြောက်ဘို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအိပ်မက်အစစ်အမှန်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည် ခြင်းတရားထဲမှာ ဆွဲခေါ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယောသပ်ဟာ အသက်တာထဲမှာ ဘုရားသခင်ထံက ရရှိထားတဲ့ အိပ်မက်ဟာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက် ကြာသည်ဖြစ်စေ သူဟာ မေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ အိပ်မက်ဟာ ဘုရားသခင်က ကိုယ်တိုင် ခံစားထားတဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်ပြီး ဣသရေလ အမျိုးသားအားလုံးအပေါ်မှာ ဘုရားသခင် ထားရှိ တဲ့ အိပ်မက်ပါ။ အဲဒါကို ယောသပ်ကလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြံအစည် တော်ထဲက လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မနော အာရုံ ထဲက ခံစားပြီး ထားတာကြောင့် သူ့အတွက် ပြဿနာ အမျိုးမျိုး တွေ့ကြုံ ရပေမဲ့ ဘယ်သောအခါမှ အခြေနေပေါ်မှာ အသက် မရှင်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြံ အစည်တော်နှင့် အသက်တာ ထဲမှာ ကိုဆက်ကပ်ပြီး အသက်ရှင် ပါတော့သည်။
နောက်ဆုံးနေဖြင့် မိတ်ဆွေကို အားပြောချင်ပါတယ်။
နောဧဟာ ဘုရားသခင် ထားရှိတဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင် အထည် ဖေါ်ပေး ခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားသခင် ပြောတဲ့အတိုင်း ပြုလုပ်ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က လူတို့အတွက် ပြုလုပ်လိုတဲ့ အပြစ်တရား ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင် လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ရ ပါတယ်။
အာဗြဟံဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ လူမျိုးတော် တည်ထောင်ရေး အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ ပါဝင် အသုံးတော် ခံပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဣဇတ်၊ ယာကုတ် တို့ဟာလည်း ယောသပ် မမွေးဖွားခင်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ရူပါရုံ အိပ်မက်တွေကို မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင် လုပ်ဆောင် အသုံးတော် ခံပေးခဲ့ရပါတယ်။ ယောသပ် လက်ထက် ရောက်လာတဲ့အခါ ဣသရေလလူမျိုးတွေကို အဲဂုတ္တုပြည်မှာ ကျွန်အဖြစ် ထားရှိမယ့် အနှစ် (၄၀၀) အစီအစဉ်ကို ယောသပ်က အကောင်အထည် ဖေါ်ပေးပြီး အသုံးတော် ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလိုဘဲ မောရှည်၊ ယောရှုတို့က အစ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ တရားသူကြီးတွေ၊ ပရောဖတ်တွေ၊ ရှင်ဘုရင်တွေဟာ ဘုရားသခင် ထားရှိတဲ့ ရူပါရုံ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေး ခဲ့ရပါတယ်။
ယနေ့ သင့်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ရူပါရုံ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖေါ် ပေးနိုင်ဘို့ ဘုရားသခင်က အသုံးပြုလိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ ၀ဲပြန် နေဘို့လိုပါတယ်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ချီးမြှောက် ချင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင် အတွက် အကောင်းဆုံး အသက်ရှင် ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ လူအဖြစ် အသက်ရှင်ဘို့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါရစေ။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော “အိပ်မက်” ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပေးထားသော သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် “ရူပါရုံ” (သို့မဟုတ်) “လမ်းညွှန်ချက်များ” ကို ဆိုလိုပါသည်။